Filtrer les éléments par date : dimanche, 02 février 2020
dimanche, 02 février 2020 20:20
Tsy hisy ny fandrosoana raha ny efa mijoro no simbaina hatrany
Lasa fanao ity mamindra mpivarotra amin'ny toerana iray vonjy maika ity, nefa dia fantatra fa dia aharitra eo indray.
Andeha atao tsena indray ny zaridaina tsara efa nandaniana vola eo Anosy.
I Mahamasina nopotehina efa tsy asiako resaka, maro ny efa natao momba iny, azo atao tsara nanangana vaovao tamin'ny toeran-kafa, dia mba nanana roa.
Izao afindra eo amoron'Anosy indray ireo mpivarotra alakamisy. Nosoritsoritina ny arabe hizarana ny faritra hivarotana.
Fantatra anefa fa io toerana io dia efa natao hipetrapetrahana, hisakafoanan'ny ankizy sy mpiasa miasa aza izy io.
Nahoana ireo mpivarotra ireo no afindrafindra toy ny tsy mpiara-belona, nefa dia Malagasy mitady ny ahavelona azy ihany koa, nahoana no tsy mametraka vahaolana maharitra ho azy ireo, sady tsy anelingelina ny fifamoivoizana, nefa koa hisian'ny tsena madio ahasoa na ny mpivarotra na ny mpividy.
dimanche, 02 février 2020 20:01
Governemanta Indianina: Nandefa fanampiana ho an'ireo tra-boina noho ny andro ratsy
Nihantsona teto amin’ny seranantsambon’Antsiranana ny sambo nitondra fanampiana avy amin’ny governemanta Indianina, entina hanampiana ireo tra-boina vokatry ny fandalovan’ny andro ratsy. Nahitana vary, fanafody, ronono, lamba firakotra sy fitafy, ary kojakoja isan-karazany ilaina amin’ny fiainana andavanandro tao anatiny. Tonga teto an-toerana nanolotra ny fanampiana ny Ambasadaoron’i Inde, Abhay Kumar, nandray izany tamin’ny anaran’ny governemanta Malagasy ny Praiminisitra Ntsay Christian.
Nilaza ny ambasadaoro Abhay Kumar fa mbola misy ny fanampiana afaka entin’i Inde, fa miankina amin’ny tena filan’i Madagasikara izany, hoy izy, indrindra fa ireo faritra izay tena voa mafy noho ny fandalovan’ny andro ratsy teo.
Ankoatra izay dia mandray ireo olona rehetra mila fitsaboana ny andiana mpitsabo ao amin’ity sambo ity, mandram-pialany eo amin’ny seranana.
dimanche, 02 février 2020 19:50
Praiminisitra Ntsay Christian: « Tsy mbola tafiditra eto Madagasikara ny valanaretina Coronavirus »
Tonga nitarika fivoriana teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny Praiminisitra Ntsay Christian, androany 2 febroary maraina ; fivoriana nijerena ny fahavononan’i Madagasikara hiatrika an’izay zavatra mety hitranga manoloana ny fihanaky ny valanaretina « coronavirus » maneran-tany ho fiarovana ara-pahasalamàna ny Malagasy.
Nitsidika ireo lamina napetraka amin’ny fanaraha-maso sy ny fandraisana ny marary raha sanatria ka tonga eto amintsika io valanaretina io, ny Praiminisitra niaraka tamin’ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny minisitry ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana, ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny minisitry ny Raharaham-bahiny, ny minisitry ny Fitaterana, ny fizahan-tany sy ny Famantarana ny Toetr’andro, ny Sekeretera Jeneralin’ny governemanta, ary ny solon-tena maharitry ny OMS eto Madagasikara, sy teknisiana avy amin’ny Institut Pasteur de Madagascar.
Wuhan-Chine: Vita tao anatin’ny folo andro ny hopitaly vaovao hitsaboana ireo voan’ny « Coronavirus »
Nanapa-kevitry zareo Sinoa fa hanorina hopitaly "préfabriqué" vaovao roa any ambanivohitr’i Wuhan, faritany nipoiran’ny valanaretina Coronavirus, handraisana an-tanana ireo marary noho ny hafenoan’ny hopitaly sy mba hifehezana ny fiparitahan’io valanaretina io.
Hafoloana no fanamby nataon’ny Sinoa hamitana ny asa. Vonona ary afaka handray marary manomboka rahampitso alatsinainy 3 febroary ny hopitaly voalohany, « Huoshenshan Hospital » izay miorina amina velarantany 25 000 m² ary misy fandriana 1 000.
Mpiasa 4 000 sy milina 100 no niasa andro aman’alina namita ny asa tao anatin’ny herinandro.
dimanche, 02 février 2020 19:34
Tafika Malagasy: Handray mpianatra vehivavy ho manamboninahitra lefitra
Nanamarika ny 1 febroary, niforonan’ny sekoly fanofanana manamboninahitra lefitra ny teo anivon’ny Tafika Malagasy. Teo Fort Duchesne-Antananarivo no niorina ny sekoly voalohany ny 1 febroary 1963, ao Antsirabe no misy ny ENSOA (Ecole nationale des Sous-Officiers de l'Armée) ankehitriny.
Natao ho andron’ny manamboninahitra lefitra ny 1 febroary. Nandritra ny fankalazana omaly, no nanambaran’ny minisitry ny fiarovam-pirenena, jeneraly Rakotonirina Léon Richard fa hanatanteraka miralenta ny Tafika Malagasy, ka amin’ity taona 2020 ity dia handray mpianatra vehivavy ho manamboninahitra lefitra voalohany ny eo anivon’ny Tafika Malagasy.
dimanche, 02 février 2020 16:40
Asa fanaovan-gazety: Nodimandry i Jacob Andriambelo
Mpanao gazety zokiolona i Jacob Andriambelo, ikoizana amin’ny asa soratra izy fahavelony. Efa tomponandraikitra tao amin’ny gazety « Le Courrier de Madagascar », « Journal de Madagascar », « Madagascar Matin ». Efa nitondra ny traikefany tao amin’ny gazety Tia Tanindrazana ihany koa.
dimanche, 02 février 2020 15:17
2 février: Journée mondiale de la vie consacrée.
dimanche, 02 février 2020 15:07
dimanche, 02 février 2020 13:32
Mananara Avaratra: Zaza niampita arabe maty voahitsaky ny fiara
Maty tsy tra-drano ny zaza iray, izay niampita arabe tampoka, nefa nisy fiara nandalo. Voahitsaka, tsy nisy alanenina azo natao taminy.
Tao Vohimanja Antanambao Be - Mananara Avaratra no niseho ny loza omaly.
dimanche, 02 février 2020 13:18
Coronavirus: Namono olona tany Philippines
Philippines no firenena voalohany nahitana olona matin’ny Coronavirus, ivelan’i Chine araka ny tatitry ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana (OMS).
Maherin’ny 300 ny olona matin’ity valanaretina ity hatramin’ny volana desambra 2019 nahitana azy voalohany tany amin’ny faritanin’i Wuhan any Chine.